Silikoon Dahaarka Maro adag Maqaarka & Soosaarayaasha - Shiinaha Warshad Sibidah Dahaarka Maro adag
Maro Madoobaadka Madoow waa maro go 'ah, oo leh astaamaha u adkaysiga heerkulka, ka-hortagga daxalka, awoodda sare oo lagu daboolay caag silikoon dabiici ah
0.4mm Silicon Coated Fiberglass Maro ayaa laga dhisay maro saldhigga ah oo marooga ah oo la marsiiyey ama la dahaadhay hal dhinac ama labada dhinacba caag silikoon ah oo si gaar ah isugu darsamay. Sababtoo ah silica silikoon ah oo aan firfircooneyn jir ahaaneed, kaliya maahan kordhinta xoogga, kuleylka kuleylka, dabka, dabka, guryaha, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay caabbinta ozone, gabowga oksijiinka, gabowga iftiinka, cimillada gabowga, caabbinta saliida iyo guryaha kale
Maro Maro Muhiim ah oo Heerkulkeedu yahay Maro Maro adag ah, oo leh astaamaha u adkeysiga heerkulka, ka-hortagga daxalka, xoogga sare oo lagu daboolay caag silikoon dabiici ah. Waa badeecad dhowaan la sameeyay oo leh hanti sare iyo codsiyo badan. Sababtoo ah iska caabinteeda gaarka ah iyo tan ugu fiican ee heerkulka sare, waxsoosaarka iyo gabowga, marka lagu daro cimri dhererkeeda, dharkan fiber-ka ah waxaa si weyn loogu isticmaalaa aerospace, warshadaha kiimikada, soosaarida baaxad weyn oo koronto, mashiinno, metallurgy, isku-ballaadhin aan kala sooc lahayn ) iyo iwm
Maro Maro adag oo iib ah
Maro Maro adag oo iib ah waxaa laga sameeyaa maaddada fiberglass-ka salka ku haya iyo tayo sare oo silikoon ah oo tayo sare leh. Magdhaw aan macdan lahayn waxaa loo isticmaali karaa isku xira tuubada waxaana si weyn loogu isticmaali karaa aagaga batroolka, injineernimada kiimikada, sibidhka iyo beeraha tamarta. Waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka ka hortagga daxalka, qalabka baakadaha iyo wixii la mid ah.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Masawiga ah
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah wuxuu ka samaysan yahay maro gibillass ah oo saldhig ah iyo tayo sare oo silikoon ah oo heer sare ah. Magdhaw aan macdan lahayn waxaa loo isticmaali karaa isku xira tuubada waxaana si weyn loogu isticmaali karaa aagaga batroolka, injineernimada kiimikada, sibidhka iyo beeraha tamarta. Waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka ka hortagga daxalka, qalabka baakadaha iyo wixii la mid ah.
Maro midab Fiberglass ah
Midabka Maro adag ee midabka leh wuxuu ka samaysan yahay marogo salka fiberglass-ka iyo tayo sare oo silikoon ah oo tayo sare leh. Magdhaw aan macdan lahayn waxaa loo isticmaali karaa isku xira tuubada waxaana si weyn loogu isticmaali karaa aagaga batroolka, injineernimada kiimikada, sibidhka iyo beeraha tamarta. Waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka ka hortagga daxalka, qalabka baakadaha iyo wixii la mid ah.
Fiberglass Maroyin Bixiyeyaashu waxay ka samaysan yihiin maro adag oo saldhiga ah iyo tayo sare oo silikoon ah oo tayo sare leh. Magdhaw aan macdan lahayn waxaa loo isticmaali karaa isku xira tuubada waxaana si weyn loogu isticmaali karaa aagaga batroolka, injineernimada kiimikada, sibidhka iyo beeraha tamarta. Waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka ka hortagga daxalka, qalabka baakadaha iyo wixii la mid ah.
Dhar Fiberglass ah
Dharka Maro adag ee loo yaqaan 'Fiberglass Dharka' ee loogu talagalay Xireynta biyaha ayaa laga sameeyaa dharka saldhigga ah ee fiberglass-ka iyo tayo sare oo heer sare ah oo silikoon ah. Heerkulka shaqada: -70 ℃ --- 280 I .Waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka dahaarka korantada. Magdhaw aan macdan lahayn waxaa loo isticmaali karaa isku xira tuubada waxaana si weyn loogu isticmaali karaa aagaga batroolka, injineernimada kiimikada, sibidhka iyo beeraha tamarta. Waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka ka hortagga daxalka, qalabka baakadaha iyo wixii la mid ah.
Dharka Fiber Glass Waayo, biyuhu
Mashiinka Fiber Muraayadda ee loogu talagalay Xireynta biyaha ayaa laga sameeyaa dharka saldhigga ah ee maaddada fiber-ka ah iyo tayo sare oo heer sare ah oo silikoon leh. Magdhaw aan macdan lahayn waxaa loo isticmaali karaa isku xira tuubada waxaana si weyn loogu isticmaali karaa aagaga batroolka, injineernimada kiimikada, sibidhka iyo beeraha tamarta. Waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka ka hortagga daxalka, qalabka baakadaha iyo wixii la mid ah.
Maro Maro ah, Maro adag Dahaarka Acrylic, Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro, Maro adag Maro adag, Aluminized Maro adag, Acrylic dahaarka Maro adag Fabric,